३६ बर्षको लामो राजनितिक यात्रा पछि प्रहलाद गिरी विधायकमा निर्वाचित
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर3को (ख) प्रदेश्सभा सदस्य पदमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)का संयुक्त उम्मेदवार प्रहलाद गिरी आफ्नो निकटम प्रतिद्वान्द्धि नेपाली कांग्रेसका जनार्धन सिंह क्षेत्रीलाई ९५ मतको झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित भएका छन्-।
पार्टी एकताको टुंगोपछि मात्रै नयाँ सरकार : प्रचण्ड
प्रचण्डले पार्टी एकिकरणको सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेर मात्रै सरकार बनाउने उल्लेख गरे । अबको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेबारे एमाले अध्यक्ष केपी ओली र आफुबीच कुनैपनि छलफल नभएको उनले प्रष्ट पारे ।
प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये अब २१ स्थानकाे परिणाम अाउन बाँकी, कहाँ कस्काे अग्रता (हेर्नुहाेस्)
मतगणना जारी रहेका २१ मध्ये १२ स्थानमा वाम गठबन्धनको अग्रता रहेकाले दुई तिहाई निश्चित भएको हो । पछिल्लो परिणाम अनुसार नेकपा एमाले एक्लैले हालसम्म ७४ सिट जितेको छ ।
प्रतिनिधिसभाकाे १६५ मध्ये १०५ सिटको नतिजा सार्वजनिक (कुन दलले कति जिते हेर्नुहाेस्)
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत १६५ मध्ये १०५ सिटको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । ५८ निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले मत गणना जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाकाे ९१ स्थानको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कसले जिते ? (हेर्नुहाेस्)
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम अाउने क्रम अझै जारी छ । अहिले सम्म प्रतिनिधिसभा तर्फकाे ९१ स्थानकाे परिणाम सार्वजनिक भइसकेकाे छ ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा ३९ स्थानको परिणाम सार्वजनिक, कहाँ कसले जिते ?
अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार वाम गठबन्धनले सर्वाधिक प्रतिनिधि सभामा ३४ र प्रदेश सभामा ३३ स्थानमा विजय हासिल गरिसकेका छन् । कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ५ र प्रदेशसभामा ६ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ।
पर्सा क्षेत्र नं.१ मा फोरम नेपाल ७०० मतान्तरले अगाडी
वीरगंज,२२ मंसिर पर्साको भर्खरै घोषित मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधी सभा क्षेत्र नम्बर १ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अग्रता लिएको छ ।
मतगणना १ बजे देखि
पर्सामा आज दिउँसो १ बजेदेखि मतगणना शुरु हुने भएको छ ।आज बिहान बसेको सर्वदलिय बैठकले दिउँसो १ बजेबाट मतगणना शुरु गर्ने निर्णय भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नागेन्द्रलाल कर्णले जानकारि दिए ।
आफूले अाफैलाई भाेट हाल्न पाएनन् यी उम्मेदवारले (हेर्नुहाेस् नामावली सहित)
आज भईरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत ४५ जिल्लाको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका विभिन्न राजनीतिक दलका केही उम्मेदवारले आफूलाई नै मतदान गर्न पाएनन् । मतदान गर्न नपाउनेहरूमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसम्म छन् ।
मतदान गर्न जाँदा महिलाकाे ज्यान गयाे
डाेटी जिल्लाको खापरमाण्डौँ आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जाने क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
सर्लाहीमा कांग्रेस र राजपा कार्यकर्ताहरुबीच झडप, एक महिला गम्भिर, स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गर्याे हवाई फायर
सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेस र राजपा कार्यकर्ताहरुबीच झडप भएको छ । झडपमा एक महिलासहित तीन जना घाइते भएका छन् । एक जनाकाे अवस्था गम्भिर रहेकाे छ ।
यसकारण पक्राउ परे सिके राउत
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनविरूद्ध अभियानको आरोपमा राउतलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।
पर्सामा मतदाताको उल्लासपूर्ण सहभागिता (फोटो फिचरसहित)
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जिल्लाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा आज बिहान ७ बजेदेखि नै मतदान शुरु भएको पर्साका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत नागेन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका सबै मतदानस्थलमा बिहानदेखि नै मतदान गर्न मतदाताको उल्लासपूर्ण सहभागिता रहेको कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
यस्ताे रह्याे भीअाइपीहरूकाे मतदान (फाेटाे फिचर)
आम निर्वाचन सुरु हुनासाथ देशका विभिन्न चुनाव क्षेत्रबाट शीर्षनेताहरुले मतदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबारको निर्वाचनमा डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकास्थित अशिग्राम मावि रुवाखोला मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
मतदान सुरक्षामा २ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित, सिधै गाेली हान्न सक्ने
मतदान स्थल र त्यस वरपर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र तालिमप्राप्त कुकुर पनि परिचालित छन् । सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीले सूचना संकलन गरी सम्वन्धित निकायमा रिपोर्टिङ गर्नेछन् ।
प्रदेश नं.२ को पहिलो बैठक वीरगंज चिनी कारखाना भवनमा हुने सम्भावना
सरकारले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने सम्भावित भवन र ठाउ छनोट शुरु गरेको छ ।
मधेसमा चुनावअघिको मौन अवधिलाई ‘कत्ल की रात’ भन्ने गरिन्छ । कत्ल अर्थात हत्या । चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा उम्मेदवार जतिसुकै बलियो देखिए पनि कत्ल की रातले नतिजा उलटफेर बनाउन सक्छ ।
लक्ष्मण थारु : जो जेलबाटै चुनाव लड्दैछन् र थरुहट आन्दोलन हाँक्दै छन्
नेपालको राजनीतिक वृतमा थोरै थारु नेताहरुको चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । त्यही थोरै नामहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो लक्ष्मण थारु ।
दुई दिनपछि चुनिँदैछन् ५५० प्रदेश सांसद, अझै टुंगो लागेन बैठकस्थल र प्रदेश प्रमुखको
काठमाडौं : दोस्रो चरणअन्तर्गत २१ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन्।
बम अाक्रमणमा गगन थापा सहित ७ घाइते, १ काे अवस्था गम्भिर
काठमाडाैँकाे बुढानिलकण्ठ स्थित चपलिमा अाज अायाेजित चुनावीसभामै बम विस्फाेट हुँदा थापा सहित ७ जना घाइते भएकाे उनका प्रेस सहयाेगि जीवन भण्डारीले बताए । नेता थापाकाे कान र ढाडमा चाेट लागेकाे छ ।
नयाँ सुरक्षा रणनीति अपनाउँदै सरकार, निर्वाचन विरोधीलाई गाेली ठाेक्न प्रहरीलाई निर्देशन
निर्वाचन विरोधी गतिविधिलाई राेक्न त्यस्ता काममा संलग्न हुनेलाई आवश्यक पर्दा गाेलीसम्म हान्न सक्ने अधिकार प्रहरीले पाएकाे छ । निर्वाचनका समयमा गम्भीर सुरक्षा खतरा देखिएमा सुरक्षाकर्मीले कडा कारवाही गर्ने भएकाे हाे ।
राजपामा प्रवेश गर्नेको लर्को
चुनाव नजिकिएसंगै राष्ट्रिय जनता पार्टीमा प्रवेश गर्नेको लर्को लागेको छ । राजपाको उद्गम थलोको रुपमा समेत रहेको वीरगंजमा अहिले दिनहुँ अन्य पार्टी परित्याग गरि राजपामा प्रवेश गर्नेको लर्को लागरको हो ।
यसरी कुर्दैछन् दलहरू मतपेटिका
दलहरुले मतपेटिका सुरक्षाको लागि आआफ्ना टोली खटाएका छन् । महिलालाई दिउँसो र पुरुषलाई रातिमा मतपेटिका कुर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि दलका महिलाले पनि मतपेटिका कुर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
लगातार तीन दिन बिदा
गृह मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हजरत मुहम्मद सलल्लाहो अलैहे वोसल्लमको जन्मदिनका अवसरमा शुक्रबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपतिय शासन ल्याएर कम्युनिष्ट शासन गर्न बामपन्थि गठबन्धन बनेको देउवाको आरोप
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतिय शासन ल्याएर कम्युनिष्ट शासन गर्न बामपन्थि गठबन्धन बनेको बताउनुभएको छ ।